Kitra – «Chan 2018» : tsy mitombin-tsaina ny Mambas «Chan 2018 | NewsMada
Kitra – «Chan 2018» : tsy mitombin-tsaina ny Mambas «Chan 2018
Tsy niandry ela fa vao tonga any Maputo ny Mambas, niroso tamin’ny fanazarantena avy hatrany, ka efa niatrika izany izy ireo ny talata lasa teo, eo amin’ny fanomanana ny lalao miverina hikatrohana amin’ny Barea, eo amin’ny fiadian-toerana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina , hatao any Kenya. Matahotra ity fihaonana ity ry zareo ka mitandrina fatratra. Tsy mitombin-tsaina mihitsy, araka izany, ireo mpilalao sy ny mpanazatra.
Niompanan’ny fanomanana, nataon’ingahy Abel Xavier, mpanazatra, ny fiarovantena sy ny fanafainganana fanafihana, miafara amin’ny famonoam-baolina. Tsy nanafina i Sonito, kapitenin’ny ekipa, fa mafy ny Barea de Madagascar, saingy manantena izy fa afaka handresy, amin’ity lalao miverina ity, satria hilalao ao amin’ny kianjany.
Amin’ny alahady ho avy izao, ao amin’ny Estadio do Zimpeto, no hanatontosana ny fihaonana, eo amin’ny roa tonta. Tsiahivina fa nisaraka ady sahala 2 no ho 2 ny roa tonta, teo amin’ny fihaonana mandroso, natao teo amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny alahady 16 jolay lasa teo. Tsy maintsy mandresy ny Barea, amin’ity, raha te hanohy ny lalana, amin’ity fifaninanana, ity.